के यो २०१ 2018 मा म्याकबुक एयर किन्न लायक छ? | म म्याकबाट हुँ
के यो २०१ 2018 मा म्याकबुक एयर किन्न लायक छ?
जब तपाईंसँग म्याकको स्वामित्व हुन्छ र तपाईं यसको नवीकरण गर्ने बारेमा सोच्नुहुन्छ, अनन्त प्रश्न उठ्दछ जुन म्याक मेरो आवश्यकताको लागि बढी उपयुक्त हुनेछ। सिद्धान्तमा, म्याक दायरा डेस्कटप वा ल्यापटपको बीचमा विभाजित हुन्छ र यदि तपाईं ल्यापटपको बहुमुखी प्रतिभाको लागि छनौट गर्नुहुन्छ, पहिलो लाइनमा हामीसँग म्याकबुक प्रो र म्याकबुक छन्, तर के म्याकबुक एयर अझै आकर्षक छ?
अवश्य। म्याकहरू "बुढ्यौली" धेरै स्वस्थ छन्। आज तिनीहरू पूर्ण संख्यामा प्रकार्यहरूको लागि मान्य छन्। यो सत्य हो कि उनीहरूसँग बजारमा उत्तम स्क्रीन छैन, तर उनीहरूका धेरै फाइदाहरू छन्।
साथै, केहि एप्पल ग्राहकहरु एक को लागी समाप्त पूर्ण रूपमा परीक्षण गरिएको मोडेल बनाम हालको म्याकबुक र म्याकबुक प्रो मोडेलहरूको खरीद तिनीहरू विवादास्पद तितली कुञ्जीपाटी सुविधा। स्क्रीन छोड्दै, जुन रेटिना र होईन डिजाइन कि केहि को लागी केहि पुरानो पुरानो हुन सक्छविशेष गरी स्क्रिनमा, बाँकी सबै सुविधाहरू छन्।
आकार म्याकबुक जस्तै छ, तर यो बहुमुखी मात्र हो पछिल्लो भन्दा। थप रूपमा, अन्य तत्वहरूमा यसले जित्छ। एउटा उदाहरण हो ब्याट्री जीवन, जुन हालको कम्प्युटर भन्दा बढी छ, म्याकबुक प्रो पनि, जुन थोरै ठूलो छ अधिक ब्याट्री हुनको लागि, उच्च प्रदर्शनको कारण आवश्यक छ। म्याकबुक ब्याट्री १२ घण्टा लामो हुन्छ।
आज अर्को अर्को मजबूत बिन्दु पोर्टको प्रकारको साथ बहुमुखी प्रतिभा हो। जबकि आजका कम्प्युटरहरूमा USB-C छ, यस अवस्थामा हामीसँग USB-A पोर्ट र SD कार्ड रिडर छ। मूल्यको रूपमा, नवीनता भुक्तान गरिएको छ। म्याकबुकको लागत € १1500०० छ र म्याकबुक एयर यी दिनहरू € € ००० मा बिक्रीमा फेला पार्न सकिन्छ। सायद यस कारणले गर्दा, जब हामी पुस्तकालयहरू वा एयरपोर्टहरूमा जान्छौं, हामी यति धेरै म्याकबुक एरस देख्छौं। अरु के छ त, यो एप्पल को दुनिया मा शुरू गर्न चाहने उपयोगकर्ताहरुको लागी उत्तम मेशिन हो र एक महँगो कम्प्युटर किन्ने बहाना छैन यदि उनीहरूले पछि यसको फाइदा लिदैनन् भने।
लेखको पूर्ण मार्ग: म म्याकबाट हुँ » एप्पल » हाम्रो बारेमा » के यो २०१ 2018 मा म्याकबुक एयर किन्न लायक छ?
MacOS १०.१10.13.6..XNUMX अब सबै प्रयोगकर्ताहरूको लागि यसको अन्तिम संस्करणमा उपलब्ध छ
वाचोस 4.3.2..11.4.1.२ र टिभीओएस ११..XNUMX.१ आधिकारिक रूपमा सबैको लागि जारी गरियो